आइन्स्टाइन: कसरी बिक्रीफोर्सको एआई समाधान मार्केटिंग र बिक्री प्रदर्शन ड्राइभ गर्न सक्दछ Martech Zone
सोमबार, अप्रिल 13, 2020 सोमबार, अप्रिल 13, 2020 Douglas Karr
मार्केटिंग विभागहरू प्रायः अंडरस्टेफ र ओभरवर्क हुन्छन् - प्रणालीहरू बीच डाटा सार्ने समयलाई सन्तुलनमा राख्ने, अवसरहरू पहिचान गर्ने, र सामग्री तैनाथ गर्ने र जागरूकता, संलग्नता, अधिग्रहण, र अवधारण वृद्धि गर्न अभियानहरू। कहिलेकाँही, म कम्पनीहरूले देख्न संघर्ष गरिरहेको छु जब त्यहाँ वास्तविक समाधानहरू छन् कि समग्र प्रभावकारिता बृद्धि गर्न आवश्यक संसाधनहरू कम गर्दछ।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता त्यस्ता प्रविधिहरू मध्ये एक हो - र यसले यो कुरा गरिरहेको छ कि मार्केटर्सलाई वास्तविक मूल्य प्रदान गर्न हामी बोल्दै छौं। प्रत्येक प्रमुख मार्केटिंग फ्रेमवर्कको आफ्नै एआई इञ्जिन हुन्छ। उद्योगमा सेल्सफोर्सको प्रभुत्वको साथ, सेल्सफोर्स र मार्केटिंग क्लाउड ग्राहकहरूले एक हेराइ लिन आवश्यक छ आइंस्टीन, सेल्सफोर्सको एआई प्लेटफार्म। जबकि धेरै एआई इञ्जिनहरूलाई धेरै विकासको आवश्यकता पर्दछ, सेल्सफोर्स आइन्स्टाइनलाई न्यूनतम प्रोग्रामिंगको साथ विस्तार गर्नका लागि विकसित गरिएको थियो र सेल्सफोर्स बिक्री र मार्केटिंग स्ट्याक भरि एकीकरण गर्दै ... चाहे बी २ सी हो वा बी २ बी।
किन बिक्री र बजारमा एआई यति प्रमुख हुँदै गइरहेको एक मुख्य कारण यो हो कि, यदि सही तरिकाले तैनाथ गरियो भने, यसले हाम्रो मार्केटि teams टोलीहरूको आन्तरिक पूर्वाग्रह हटाउँछ। मार्केटरहरू विशेषज्ञता र दिशातर्फ बढ्दछन् जब उनीहरू ब्रान्डि,, सञ्चार, र कार्यान्वयन रणनीतिहरूको कुरा गर्छन्। हामी प्राय: डाटामा कंघी गर्छौं समर्थनलाई मद्दत गर्न जुन हामीमा धेरै विश्वास छ।
एआई को प्रतिज्ञा यो छ कि यो एक निष्पक्ष राय प्रदान गर्दछ, तथ्यमा आधारित, र एक जुन समयको साथ सुधार गर्न जारी रहन्छ नयाँ डेटा प्रस्तुत हुँदै जाँदा। जब म मेरो पेटमा विश्वास गर्दछु, म सधैं AI ले उत्पादनहरू द्वारा प्रभावित हुन्छु! अन्तत: म विश्वास गर्दछु यसले मेरो समय फुकाउछ र यसले मलाई वस्तुगत डेटा र फाइदाको फाइदाका साथ सृजनात्मक समाधानमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्षम गर्दछ।
सेल्सफोर्स आइनस्टेन भनेको के हो?
आइन्स्टाइनले कम्पनीहरूलाई छिटो निर्णय लिन, कामदारहरूलाई बढी उत्पादक बनाउन, र सेल्सफोर्स ग्राहक 360 XNUMX० प्लेटफर्ममा कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) प्रयोग गरेर ग्राहकलाई खुशी पार्न सहयोग पुर्‍याउँछ। यो प्रयोगकर्ता ईन्टरफेस को न्यूनतम प्रोग्रामिंग को आवश्यकता छ र भविष्य को मार्केटिंग र बिक्री प्रयास को भविष्यवाणी गर्न वा अनुकूलन गर्न ऐतिहासिक डेटा लिन मेशिन शिक्षा को उपयोग गर्दछ।
त्यहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्तालाई लगाउन सक्ने धेरै तरिकाहरू छन्, यहाँ सेल्सफोर्स आइन्स्टाइनका प्रमुख फाइदाहरू र सुविधाहरू छन्:
बिक्री बल आईन्स्टाइन: मेशिन लर्निंग
तपाईंको व्यवसाय र ग्राहकहरूको बारेमा बढि भविष्यवाणी गर्नुहोस्।
आइन्स्टाइन डिस्कवरी - उत्पादकता बढाउनुहोस् र तपाईंको सबै डाटामा सान्दर्भिक बान्कीहरू पत्ता लगाउनुहोस्, चाहे यो सेल्सफोर्समा वा बाहिर रहन्छ। साधारण एआई अंतर्दृष्टि र कडा समस्याहरूको सिफारिसहरू फेला पार्नुहोस्। त्यसोभए, कहिल्यै पनि सेल्सफोर्स नगरीकन आफ्नो खोजहरूमा कार्य लिनुहोस्।
आइन्स्टाइन भविष्यवाणी बिल्डर - व्यवसाय परिणामहरूको पूर्वानुमान गर्नुहोस्, जस्तै मंथन वा आजीवन मान। कुनै पनि सेल्सफोर्स फिल्डमा कस्टम AI मोडेलहरू सिर्जना गर्नुहोस् वा क्लिकको साथ वस्तु, कोड होइन।
आइन्स्टाइन नेक्स्ट बेस्ट एक्शन - कर्मचारीहरु र ग्राहकहरु लाई साबित सिफारिसहरु डेलिभर गर्नुहोस्, अनुप्रयोगहरूमा जहाँ तिनीहरू काम गर्दछन्। सिफारिसहरू परिभाषित गर्नुहोस्, कार्य रणनीतिहरू सिर्जना गर्नुहोस्, भविष्यवाणी गर्ने मोडेलहरू निर्माण गर्नुहोस्, सिफारिसहरू प्रदर्शन गर्नुहोस्, र स्वचालन सक्रिय गर्नुहोस्।
बिक्री बल आईन्स्टाइन: प्राकृतिक भाषा प्रक्रिया
भाषिक बान्की पत्ता लगाउन NLP को प्रयोग गर्नुहोस् तपाईले प्रश्नको उत्तर दिनका लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, अनुरोधलाई जवाफ दिनका लागि, र वेबमा तपाईको ब्रान्डको बारेमा कुराकानीहरू पहिचान गर्न।
आइन्स्टाइन भाषा - बुझ्नुहोस् ग्राहकहरु कस्तो महसुस गर्छन्, स्वचालित रूपमा रुक्छ रूच, र तपाईंको कार्यप्रवाह स्ट्रिमलाइन गर्नुहोस्। तपाईंको भाषामा प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण बनाउँनुहोस् पाठको मुख्य भागमा अंतर्निहित अभिप्राय र भावना वर्गीकृत गर्न भाषा, जे भए पनि।
आइन्स्टाइन बट्स - सजिलैसँग निर्माण गर्नुहोस्, ट्रेन गर्नुहोस्, र डिजिटल च्यानलहरूमा कस्टम बट्स डिप्लोय गर्नुहोस् जुन तपाईंको सीआरएम डाटासँग जडित छ। व्यापार प्रक्रियाहरू बृद्धि गर्नुहोस्, तपाइँका कर्मचारीहरूलाई सक्षम पार्नुहोस्, र तपाइँको ग्राहकहरूलाई खुशी पार्नुहोस्।
सेल्सफोर्स आइन्स्टाइन: कम्प्यूटर भिजन
कम्प्युटर दर्शनले दृश्य बान्की पहिचान र डाटा प्रोसेसिंग तपाईंको उत्पाद र ब्रान्ड ट्र्याक गर्न, छविहरूमा पाठ पहिचान गर्न, र अधिक समावेश गर्दछ।
आइन्स्टाइन दृष्टिकोण - तपाईंको ब्रान्डको बारेमा सम्पूर्ण कुराकानीहरू सोशल मीडियामा र बाहिर पनि हेर्नुहोस्। तपाईंको ब्रान्ड, उत्पादनहरू, र अधिकलाई बुझ्नको लागि गहिरा शिक्षा मोडेललाई प्रशिक्षण दिएर बौद्धिक छवि मान्यता प्रयोग गर्नुहोस्।
बिक्री बल आईन्स्टाइन: स्वचालित स्पिच पहिचान
स्वचालित बोली मान्यता बोलिएको भाषालाई पाठमा अनुवाद गर्दछ। र आइन्स्टाईनले यसलाई एक कदम अगाडि लिन्छ, त्यो पाठलाई तपाइँको ब्यापारको सन्दर्भमा राखेर।
आइन्स्टाइन आवाज - दैनिक ब्रीफिंगहरू पाउनुहोस्, अद्यावधिक गर्नुहोस्, र ड्राइभ ड्यासबोर्डहरू सरल रूपमा आईन्स्टेन भ्वाइस सहायकसँग बोलेर। र, सिर्जना गर्नुहोस् र आइनस्टाइन भ्वाईस बट्सको साथ तपाईंको आफ्नै अनुकूलित, ब्रान्डित आवाज सहायकहरू सुरूवात गर्नुहोस्।
उत्पादन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई अनुसन्धान, प्रयोग केसहरू, र प्राय: सोधिने प्रश्नहरूको बारेमा थप जानकारीको लागि बिक्रीफोर्सको आइंस्टीन साइट भ्रमण गर्नुहोस्।
बिक्री बल आईन्स्टाइन
सम्पर्क गर्न निश्चित हुनुहोस् बिक्री बल परामर्श र कार्यान्वयन फर्म, Highbridge, र हामी तपाईंलाई यी रणनीतिहरू मध्ये कुनै एकलाई परिमार्जन गर्न र एकीकृत गर्न सहयोग गर्न सक्छौं।
टैग: कृत्रिम बुद्धिकम्प्युटर दृष्टिआइंस्टीनआइन्स्टाइन एनएलपीआइन्स्टेन दर्शनआइन्स्टाइन आवाजछवि विश्लेषणप्राकृतिक भाषा प्रशोधनबिक्री बलबिक्री बल आईन्स्टाइनसेल्सफोर्स आइन्स्टाइन भविष्यवाणीबिक्री बल पूर्वानुमानविक्रेता आइनस्टेन भनेको के हो